🥇 ubalo lweofisi yamazinyo
Ividiyo yokwenza ingxelo yeofisi yamazinyo
Yenza iodolo accounting yeofisi yamazinyo
Ukubalwa kweofisi yamazinyo kubaluleke kakhulu! Ukuzenzekelayo kwiofisi yamazinyo kuvula uluhlu olupheleleyo lwezinto ezinokwenzeka kuzo zonke iingcali! Isoftware yobalo lweofisi yamazinyo ixhasa ubalo, ulawulo kunye nolawulo lwempahla. Abasebenzisi abaliqela banokusebenza kwinkqubo yobalo lweofisi yamazinyo ngaxeshanye. Kwangelo xesha, kwicandelo lesicelo sobalo-mali kwi-ofisi yamazinyo 'Uphicotho-zincwadi', ungasoloko ufumanisa ukuba ngubani kubasebenzisi ongeze le okanye irekhodi okanye wayicima. Ngoncedo lwenkqubo yobalo yomsebenzi weofisi yamazinyo, abamkelekileyo banokukhawuleza bayamkele intlawulo. Intlawulo inokwenziwa ngokoluhlu lwamaxabiso athile; inokuba luluhlu lwamaxabiso ngokubanzi okanye uluhlu lwamaxabiso ngezaphulelo okanye iibhonasi. Inkqubo yokubeka iliso kwi-ofisi yamazinyo kunye nenkqubo yokunika ingxelo ibonelela ngokusebenza okuhlukileyo kubalawuli, oogqirha bamazinyo kunye neengcali, kuba nganye yazo isebenza nendawo yayo yomsebenzi. Ukongeza, inkqubo yobalo yokusebenza kweofisi yamazinyo inokulungiswa ngokukodwa kwiziko ngalinye: unokuseta ilogo yeklinikhi kwifestile ephambili, igama leofisi yamazinyo kwisihloko senkqubo yobalo, kwaye usete eyakho umxholo womxholo. Unokuziqhelanisa nokuzimela kunye nenkqubo yobalo-mali yokubeka esweni umsebenzi weofisi yamazinyo. Ukwenza oku, khuphela ingxelo yedemo kwiwebhusayithi yethu kwaye uqalise! Uyayithanda inkqubo yobalo lwekhompyuter yeofisi yamazinyo, unokuqiniseka! Ukusebenza neofisi yamazinyo kuya kuba lula kwaye kube lula.
Inkqubo yozinzo kwiofisi yakho yamazinyo iyaqinisekiswa ngenxa yesicelo sobalo. Kwishishini, iimeko zokunyanzelwa ziqhelekile. Umlawuli unokugula, kwaye lonke unxibelelwano nezigulana lubotshelelwe kuye; Umsebenzi onayo yonke idatha waye washiya umsebenzi ngenye imini kwaye wayengenalo ixesha lokudlulisela lonke ulwazi kwabanye; yinto encinci ukulibala okanye ukulahlekelwa yile okanye olo lwazi. Ukuzenzekelayo kweenkqubo zeshishini kukhusela ngokuchasene neemeko ezinjalo. Lonke ulwazi lurekhodwe kwinkqubo yobalo zolawulo lweofisi yamazinyo, iinkqubo zilawulwa ngokucacileyo kwaye zimiselwe, idatha kwizigulana kunye neeprojekthi zigcinwa kwisicelo sakho sobalo. Uzinzo alophulwa naxa umqeshwa omtsha esaziswa kule nkqubo. Unako ukufikelela kuyo yonke imbali kwiziko ledatha, kwaye inkqubo yobalo yolawulo lweofisi yamazinyo inyusa amanyathelo kwaye uqeqesho aluthathi ixesha elininzi. Ukuqinisekisa ukuba kwixa elizayo iishedyuli ezisebenzayo zoogqirha 'azidibani' kwishedyuli, kwaye nomphathi unokurekhoda kakuhle abaguli, sicebisa ukuba usete umbala ongasemva ohlukileyo kugqirha ngamnye. Ukwenza oku, cofa ku 'Guqula umbala', ukhethe oyifunayo, cofa kube kanye ngeqhosha lasekhaya le mouse kwaye uqinisekise ukhetho lwakho ngokunqakraza 'Kulungile'. Ukuba iklinikhi yakho inoogqirha abaninzi kunemibala kwinkqubo yolawulo lweofisi yamazinyo, unokwabela umbala omnye koogqirha abaliqela- umzekelo, abo bangasebenziyo ngemini enye. Ukuba unayo iklinikhi enamasebe kwaye kwangaxeshanye i-database yesigulana esiqhelekileyo, kuya kuvela indawo eyongezelelweyo apho kuyakufuneka uchaze ukuba leliphi isebe (okanye amasebe) asebenza kulo. Emva kokufaka yonke idatha eyimfuneko, gcina ikhadi lomqeshwa kunye nalo lonke utshintsho kulo.
Ngoncedo lweengxelo, umlawuli okanye umphathi unokuhlalutya imeko yemicimbi kwiofisi yamazinyo ngaphandle kokuphosa amanqaku abalulekileyo. Ukufumana ulwazi kwimizuzwana embalwa malunga nokuba luphi na unyango oluhlawulisiweyo namhlanje kwaye ukusukela ekuqaleni kwenyanga, yimalini ehlawuliweyo kwiityala, oogqirha abakhokelela kuzo ngokwamatyala, zingaphi izigulana ezitsha ezivele kwasekuqaleni yenyanga, ingaba uxinene kangakanani irekhodi leentsuku neeveki ezizayo, yiya kwingxelo ekhethekileyo. Kwiingcali ezinendima 'yoMlawuli', ivula xa uqala inkqubo yobalo-mali yolawulo lweofisi yamazinyo. Uya kubona indawo eyahlulahlulwe yangamacandelo anegrafu kunye neenombolo- ezi ziingxelo zesishwankathelo kwizalathi ezingundoqo zeklinikhi. Ingxelo 'yezigulana' isetyenziselwa ukwahlula isiseko sedatha yakho yabathengi ngeendlela ezahlukeneyo, ezinje ngeminyaka, isini, idilesi, inani labantu abaqeshiweyo, xa kuqeshwa okokuqala, inani lonyango, inqanaba leakhawunti yakho, nendlela abafumene ngayo malunga neklinikhi , kwaye nangokunjalo. Ngale ngxelo, ungagcina umkhondo wazo zonke izigulana, kubandakanya nabo bangakhange baye kwiklinikhi yakho ixesha elide, kwaye wenze ngokusesikweni ukuhanjiswa kwe-SMS (ukuba unesivumelwano neziko le-SMS) ngolwazi malunga nokunyuselwa kunye nezibonelelo ezizodwa.
Ingxelo 'yezaphulelo' yenzelwe ukuhlalutya umsebenzi wezaphulelo- zonke kunye kunye nomntu ngamnye. Ngokukodwa, ukulandelela zonke izaphulelo ezivela kubasebenzi, ukubona ukuba yeyiphi indawo efumene izaphulelo ukuqonda ukuba ulahlekelwa yimali ngenxa yale nto njalo njalo. Ngengxelo 'yeeBhili kunye neeNtlawulo', ungabona zonke iidiphozithi zemali, iiakhawunti ezingavalwanga, ukulandelela ukubuyiselwa kwemali kwesigulana, kwaye ubone ukuba yeyiphi na irejista eyenziweyo. Ngengxelo 'yeeNkonzo ezibonelelweyo', ubona ulwazi ngazo zonke iinkonzo ezibonelelweyo, jonga ukuba zibalwe ngokuchanekileyo na kwizigulana, kwaye uhlalutye iindleko eziphakathi zokunyanga izinyo elithile.
Inkqubo yeqela le-USU-Soft leengcali ezinobungcali kakhulu libonelela ngamathuba amaninzi okuphuculwa ngumbutho wakho wezonyango. Sebenzisa la mathuba kwaye uzise ucwangco kwiziko lakho lonyango.